Yini ukulandelwa kwemisebe futhi kutholakala kumaphi amakhadi evidiyo? Ulator I-Emulator.online ▷ 🥇
Yini ukulandelwa kwemisebe futhi kutholakala kumaphi amakhadi evidiyo?
Lapho sifunda ukubuyekezwa kwemidlalo emisha yevidiyo, sivame ukuhlangana negama elithi Ray tracing uma kukhulunywa ngemidwebo, noma ngabe kunabasebenzisi abambalwa abazi kahle ukuthi yenzelwe ini nokuthi kungani kubaluleke kangaka ukuhlola ubuhle bomdlalo. . Yize sekwedlule isikhathi esinqunyelwe Ukulandelwa kukaRay ubuchwepheshe obuyinkimbinkimbi nobunzima ukubuchaza Kodwa-ke, ngamagama alula, singafingqa ukusebenza kwayo ngamagama alula futhi aqondakala kalula, ukuze noma yimuphi umsebenzisi aqonde ukuthi kungani ukusetshenziswa kwayo emidlalweni yesizukulwane esilandelayo kubaluleke kangaka.
Kulesi siqondisi sizokukhombisa yini i-ray tracing futhi sizokukhombisa namakhadi wevidiyo ayixhasayo, ukuze sikwazi ukwenza lesi sici sisebenze ngokushesha nje lapho siqala umdlalo obandakanya ukusetshenziswa kobuchwepheshe (imvamisa kugqanyiswa kahle kuzibuyekezo noma kuthebhu yokubuka kuqala yomkhiqizo okhethiwe.
Umhlahlandlela wokulandela i-Ray
Ukulandela ngomkhondo uRay kunzima ukukuchaza, kepha ukusebenza kwayo kumele kuphenywe ngokuphelele ukuqonda ukuthi kuletha ziphi izinzuzo nokuthi kungani kungakuhle ukuthi ngaso sonke isikhathi siyishiye isebenza emidlalweni eyisekelayo (inetha lekhadi lemidwebo esinalo). Uma singenalo ikhadi lemidwebo elihambisanayo sizokukhombisa nokuthi imaphi amamodeli esingawathenga ukuthola ukulandelwa kwemisebe emidlalweni yePC.
Yini ukulandelwa kwemisebe?
Ukuthungatha i-Ray ubuchwepheshe obusebenza ku-geometry ye-optical ukwakha kabusha indlela eyenziwe ukukhanya, kulandela imisebe yayo ngokuhlangana nezindawo. Ukukhanya kwangempela kubonakala kuzo zonke izindawo futhi kufinyelela iso lethu, elikutolika njengokukhanya nemibala; Kumdlalo wevidiyo, le ndlela kufanele ibalwe ngokunembile kusetshenziswa i-algorithm, ukwenza kabusha imiphumela yokukhanya nethunzi ngendlela engokoqobo engenzeka; njengamanje i-algorithm enhle kakhulu yokwenza kabusha izibani nezithunzi eziseduze ne-photorealism isebenzisa i-ray tracing lapho ihambisa isithombe se-3D.
Ngokulandela umkhondo we-ray osebenzayo, izithunzi zinemininingwane eminingi futhi izinto ezikhanyisiwe (kunoma yikuphi ukukhanya) ziyamangalisa ngempela, okwenza ihluzo ezinembile kakhulu futhi ezinhle kumdlalo ikakhulukazi ngezinqumo eziphezulu (4K UHD).
Okubi kokulandelwa kwemisebe yi umthelela wayo ekusebenzeni kwanoma yiliphi ikhadi lehluzo- Ukusebenza ngamalambu nezithunzi ezingezona ezangempela kudinga i-GPU enamandla kakhulu (mhlawumbe ifakwe i-chip enikezelwe kuphela ukuthola umkhondo we-ray), isikhala esiningi sememori yevidiyo nokusetshenziswa kwamandla okuphezulu. Uma sithatha isinqumo sokusebenzisa ukulandelwa kwemisebe, imvamisa sizokwehla ekusebenzeni kukonke, okuzodinga ukuthi nakanjani izilungiselelo ezincane ngaphambi kokuthi uthole ukuvumelana okulungile.
I-Schede video ene-ray tracing
Ngabe sasihlaba umxhwele ngekhwalithi yemidwebo enokulandelwa kwemisebe okusebenzayo? Uma ikhadi lethu levidiyo lisanda kwanela (2019 okungenani), kufanele lisekele ukulandelwa kwemisebe ngaphandle kwenkinga, vele uhlole izilungiselelo zakho zegeyimu (okuvame ukutholakala njengento ezinikele (RTX noma okufanayo) noma kucushwa ngesethingi yehluzo ephezulu noma Isiphetho esiphakeme). Ngabe ikhadi lethu levidiyo alikusekeli ukulandelwa kwemisebe? Singayilungisa ngokushesha ngokukhetha eyodwa yamathebhu angezansi.
Uma sifuna ukugxila ekhadini le-NVIDIA ukusizakala ngokulandela umkhondo we-ray, sincoma ukuthi IGigabyte GeForce RTX 3070, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 1000.
Kuleli khadi levidiyo sithola isizukulwane sesibili iCore RT, i-chip ezinikele ekulandeleleni imisebe eqinisekisa ukufiphaza ngasikhathi sinye namalambu we-photorealistic, ezingeni elisha lokusebenza kwalolu hlobo lobuchwepheshe. Ngaphezu kokulungiselelwa okuthile kokulandela umkhondo we-ray, sithola nesistimu yokupholisa ethuthukisiwe kanye nohlelo lokuzenzekela ngokweqile oluzenzakalelayo, olukhulisa ngokuzenzakalela imvamisa ye-GPU lapho kudingeka izibalo eziningi zekhompyutha (njengalapho senza kusebenze ukulandelela imisebe).
Uma sifuna ukusebenzisa ithuba lokulandela umkhondo we-ray ngekhadi levidiyo le-AMD, sincoma ukuthi ugxile kulo SAPPHIRE NITRO + AMD Radeon RX 6800 XT OC, itholakala ku-Amazon ngemali engaphansi kuka- € 2000.
Ngaleli khadi sizokwazi ukusizakala ngokulandela umkhondo we-AMD osezingeni eliphakeme, ophethwe ngama-cores we-CU ahlanganisiwe (akukho chip ezinikele njengaku-NVIDIA kepha kunenqwaba yabaphenyi abancane abakwazi ukudala zonke izingxenye zemifanekiso). Uma sifuna izixazululo ezishibhile, sikumema ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu. Amakhadi wevidiyo amahle kakhulu we-PC.
Ingabe ama-game consoles asekela ukulandelwa kwemisebe?
Kuze kube manje sikhulume ngamakhadi evidiyo e-PC, kepha uma sigxila ekugxileni kwamagumbi okuhlala, imaphi ahambisana nokulandela umkhondo we-ray? Zinjani izinto manje I-PS4 ne-Xbox One (induduzo yesizukulwane esedlule) Ukulandela ngomkhondo i-ray akusekelwangenkathi I-PS5 ne-Xbox Series X isekela ukulandelwa kwemisebe ngokusebenzisa okuhlinzekwe ngamakhadi we-AMD (ngoba bobabili basebenzisa inguqulo eguquliwe ye-chip chip ekhona kumakhadi wevidiyo we-AMD akamuva).
Uma sifuna ukuzuza ngokulandela umkhondo we-ray ngaphandle kokuthenga isiteshi sokudlala se-PC (nangaphezulu kwe- € 1200) vele ubambe okukodwa kokududuzelwa kwegumbi lokuphumula elilandelayo futhi iphusha izilungiselelo zehluzo ziye phezulu (emidlalweni lapho kukhona isikhethi sekhwalithi yehluzo esitholakalayo). Ngeminye imininingwane ngesihloko sePS5, siphakamisa ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu Injani iPS5? ukuhlaziywa kanye nomhlahlandlela we-Playstation entsha.
Ukulandelwa kukaRay kungaguqula impela ihluzo zemidlalo yesimanje, okungaphezulu nje kokuphakamisa noma ukukhuthazela ukwamukelwa kwe-HDR: ukuba yi-algorithm eyinkimbinkimbi futhi esezingeni eliphakeme, kuzothatha isikhathi ukuhlanganisa kuyo yonke imidlalo, kepha ngayo sizosondela. ku-photorealism yangempela.
Ingabe i-PC yethu ayisekeli ukulandela umkhondo we-ray? Kulokhu kuzofanele senze izibuyekezo ezibalulekile ngaphezu kwekhadi levidiyo; ukwazi okuningi sikukwazisa ukuthi ufunde imihlahlandlela yethu Izidingo zehadiwe nokucaciswa kokudlala imidlalo yevidiyo kwikhompyutha yakho mi I-PC Enamandla Kunazo Zonke - Izingxenye Zekhompyutha Ezinhle Zanamuhla. Uma, kunalokho, sifuna ukudlala imidlalo ye-PC kuthelevishini (esikhundleni sekhonsoli), siphakamisa ukuthi ufunde isifundo sethu ngokujulile. Idlalwa kanjani imidlalo ye-PC ku-TV.
Ungayibuka kanjani iDisney + ku-TV
Ungabenza kanjani ubuciko be-pixel kusuka kuma-PC, ama-Smartphones namaphilisi
Ungalifaka kanjani ikhadi ku-Google Play naku-Apple Store
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokufaka amakhodi
Imidlalo yomhlaba evulekile kakhulu ye-Android ne-iPhone
Ungasilawula kanjani isivinini semidlalo ku-PC
Ungayikhubaza kanjani yonke inzwa ku-smartphone yakho
Imidlalo yokugqoka kahle nemfashini ye-Android ne-iPhone
Ungayisebenzisa kanjani i-eGPU ku-MacBook ukuthuthukisa ukusebenza kwe-3D
Ungakukhubaza kanjani okubhaliselwe ku-Android, i-iPhone, i-iPad ne-Windows 10
Izindlela ezihamba phambili ezinhlelweni zokusebenza zeGoogle